Забур 63 CARS - Nnwom 63 ASCB
Dawid dwom. Ɛberɛ a ɔwɔ Yuda Ɛserɛ so no na ɔtoeɛ.
1Ao, Onyankopɔn, wone me Onyankopɔn
Mehwehwɛ wo anibereɛ so;
me onipadua ani agyina wo,
wɔ asase a awo na ɛserɛ nni so,
baabi a nsuo nnie.
2Mahunu wo wɔ Kronkronbea hɔ
mahunu wo tumi ne wʼanimuonyam.
3Esiane sɛ, wʼadɔeɛ di mu sene nkwa enti
mʼano fafa bɛhyɛ wo animuonyam.
na wo din mu na mɛpagya me nsa.
5Me ɔkra bɛmee sɛdeɛ wadi aduane papa bi;
mede anofafa a ɛto dwom bɛyi wo ayɛ.
Anadwo dasuo mu nyinaa, medwene wo ho.
7Ɛfiri sɛ, wone ne ɔboafoɔ,
wo ntaban ase nwunu mu na mɛto dwom.
10Wɔbɛdane wɔn ama akofena
na wɔbɛyɛ aduane ama sakraman.
11Nanso ɔhene bɛdi ahurisie wɔ Onyankopɔn mu;
na wɔbɛmua atorofoɔ ano.
ASCB : Nnwom 63